Kurdistance: Mangingina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 11:53 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny novambra 2006)
Iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra momba ny fandrakofana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy isan-karazany ny fiverimberenan'ny vaovao sy ny fifamoivoizan'ny lahatsoratry ny olona. Somary mangingina hafahafa ny tontolon'ny bilaogy Kiorda tao anatin'ny tapa-bolana, karazana fahanginana fahita mialoha ny tafio-drivotra mahery.
Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes nanoratra momba ny kolikoly manjaka ao Avaratr'i Iraka/Atsimon'i Kurdistan. Vladimir ao amin'ny From Holland to Kurdistan kosa miresaka momba ny fiakaran'ny lazan'ny politika Frantsay iray mpomba ny Kiorda. Rasti indray mampiseho ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny PKK. Ary i Save RojTV kosa mankalaza ny herintaonany.
Miala tsiny noho ny fiadan'ny herinandro, na izany aza, raha te hamaky resadresaka mahaliana momba ny natioran'i Kurdistan ara-jeografika ianao, jereo ireo fanehoan-kevitra farany ao amin'ny Kurdistance.